စာရိုက်နှုန်းမြင့်မားခြင်းကအထက်တန်းကျောင်းသားများ၏နှစ်ရှည်လေ့လာမှုတွင်ပါးစပ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအတွေ့အကြုံကိုဖျန်ဖြေပေးသည် (2015) - Your Brain On Porn
Volume ကို 49သြဂုတ်လ 2015, စာမျက်နှာများ 526-531
ငါသူတို့ရဲ့နည်းပညာအသုံးပြုမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်။ ဆယ်ကျော်သက် (366-13 နှစ်) (17) စစ်တမ်းကောက်ယူ။
အနည်းငယ်လေ့လာမှုများအမြင့်ဆုံးအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတအရှိန်မြှင့်စေခြင်းငှါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိနေသော်လည်းစံတန်ဖိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များမှနည်းပညာအသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ ဒီလေ့လာမှုကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖှံ့ဖွိုးတိုးတကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ longitudinal အွန်လိုင်းစစ်တမ်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားဘုံနည်းပညာအသုံးပြုမှုလေးအမျိုးအစားများအားဖြင့်စေ့စပ်ဖြန်ဖြေဘို့စမ်းသပ်မှု (ကရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစား, ပထမပါးစပ်လိင်, ပထမဦးဆုံးလိင်ဆက်ဆံခဲ့ဘဲလျက်): (ကမိုဘိုင်းဖုန်းမှ) စာသား, ယေဘုယျအားအင်တာနက်ကို / ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှု, ဗွီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်။
အရှေ့ပိုင်းကနေဒါအထက်တန်းကျောင်းရှစ်ခုတွင်ဆယ်ကျော်သက် ၃၆၆ ယောက် (၃၇% အထီး၊ ၁၃ - ၁၇ နှစ်) ဖြစ်သည်။ ပါဝင်သူများအားလုံးသည်လူ ဦး ရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်၊ လိင်နှင့်ဆက်နွယ်မှုသမိုင်းကြောင်းနှင့်မကြာသေးမီကနည်းပညာများအသုံးပြုမှုကိုအကဲဖြတ်သည့်အတိုင်းအတာများစွာကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကို (366%) နှစ်နှစ်အကြာတွင်နောက်ဆက်တွဲအကဲဖြတ်မှာစစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သည်။
အသက်အရွယ်အဘို့အညှိပြီးနောက်, စာသား၏မြင့်မားသောအဆင့်အတန်းအချိန်ကျော်ပါးစပ်လိင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုနှစ်ဦးစလုံး၏အစီရင်ခံစာများအတွက်ဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့။ စာသားနဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းအကြားအသင်းအဖွဲ့မိဘရငျးနှီးနေဖြင့်တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမကအခြားနည်းပညာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ဖုန်းနဲ့စာပို့ယင်း၏အလွန်အမင်းအပြန်အလှန်သဘောသဘာမှဖြစ်နိုင်သည်ဆက်စပ်အခြားနည်းပညာများဖြင့် shared မဟုတ်ထူးခြားသော features တွေရှိသည်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။ ဤအရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်. Insights လူငယ်အားဖြင့်အသစ်သောနည်းပညာများကို၏လျင်မြန်စွာစုပ်ယူသုံးစွဲမှုပေးထားသောတန်ဖိုးရှိပါတယ်။ တွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်မှဘုံရငျးနှီးမှုနှငျ့ relational လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်ကူညီရာတွင်နည်းပညာ၏အခန်းကဏ္ဍကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Lucia F. O'Sullivan မှ Ph.D ဘွဲ့ကိုဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ကနေဒါသုတေသနဥက္ကChair္ဌထံမှရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းကိုဤလေ့လာမှုကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ စာရေးသူကဒေတာစုဆောင်းခြင်းအတွက်သူမ၏ကူညီမှုအတွက် Mary Byers ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။
နေရပ်လိပ်စာ: စိတ်ပညာဌာန, နယူး Brunswick တက္ကသိုလ်, PO Box 4400, Fredericton, NB E3B 5A3, ကနေဒါ။ Tel .: + 1 (506) 458 7698 ။